Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah | Farmashiyaha RXS
Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ayaa loo adeegsaday mid kasta oo ku lug leh diiwaangelinta iyo ka-qaybgalka koorsada ee Xarunta Waxbarashada Koorsada ee MaxCoach.
1 Helitaanka Websaydh
2 Xaquuqda Xuquuqda ee Xoolaha
3 Waajibaadka Shirkadda
4 Sharciga Xukunka iyo Goobta
Xubintu waxay aqoonsan tahay in taraafikada xogta ee loo maro internetka ay sababi karto dib u dhac
inta lagu jiro soo dejinta macluumaadka websaydhka iyo sidaa awgeed, kama qaadi doonto Shirkadda mas'uuliyadda dib u dhacyada caadiga ka ah isticmaalka internetka.
Xubinta ayaa sii qireysa oo aqbashay in websaydhka aan laga heli doonin afar iyo labaatan saacadood oo isdaba joog ah sababo la xiriira dib u dhacaas oo kale, ama dib u dhacyo ka dhasha cusboonaysiinta Shirkadda, wax ka beddelkeeda, ama dayactirka caadiga ah ee websaydhka.
Koorsada khadka tooska ah waxaa iska leh Shirkadda waxaana ilaaliya xuquuqda Mareykanka iyo kan caalamiga ah, astaan ​​ganacsi, astaan ​​gaar ah, sir ganacsi iyo waxyaabo kale oo aqooneed ama sharciyada xuquuqda lahaanshaha.
Xaq, xuquuq ama daneyn ama koorsada khadka tooska ah ama qayb ka mid ah, looma wareejiyo Xubin kasta, iyo dhammaan xuquuqaha aan si cad loogu bixin halkan, waxaa iska leh Shirkadda.
Magaca Shirkadda, astaanta Shirkadda, iyo dhammaan magacyada la xiriira, astaamaha, magacyada wax soo saarka iyo adeegga, naqshadaha
iyo halku dhigyo, waa calaamadaha ganacsiga ee Shirkadda. Xubinta ma isticmaali karo calaamadaha noocaas ah
iyadoon ogolaansho qoraal ah oo rasmi ah laga helin Shirkadda.
Shirkaddu waxay adeegsan doontaa dadaal ganacsi oo macquul ah si ay awood ugu siiso koorsada khadka tooska ah inay noqoto mid la heli karo, marka laga reebo dayactirka jadwalka ah iyo dayactirka loo baahan yahay, iyo marka laga reebo wixii carqalad ah ee sababaha ka baxsan awoodda macquulka ah ee ka baxsan, ama aan si macquul ah u saadaalin karin Shirkadda.
Sharciga Xukunka iyo Goobta
Shuruudaha Adeegga waxaa qeexay oo xukuma sharciyada Mareykanka Mareykanka.
Haddii mid ka mid ah qodobbada, gebi ahaan ama qayb ahaan, qandaraaska uu noqdo ama noqdo mid aan ansax ahayn ama aan la fulin karin, tani uma adeegi doonto inay baabi'iso qodobbada harsan.
Taariikhda Dhaqan galka: 01/01/2020